မစ္စတာတိတ်ဆိတ်, Interbad 2018 မှာအများစုကဆန်းသစ်သောရေကူးကန်အပူ Pump - Aquark လျှပ်စစ် Co. , Ltd မှ
ဒါဟာစတုဂတ်, ဂျာမနီအတွက် Interbad တက်ရောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အချိန်ကိုယူပြီးအဘို့သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအင်ဗာတာရေကူးကန်အပူစုပ်စက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြံအစည်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေဖလှယ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာတိတ်ဆိတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါဒီဇိုင်းကိုအင်ဗာတာမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်အများဆုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မစ္စတာတိတ်ဆိတ်မြေတပြင်လုံးပြပွဲများတွင်အများဆုံးဆန်းသစ်ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာပြပွဲမှာအမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံတွေထဲကနေဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ အများအပြားအမိန့်ကိုအလွန်ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးခဲ့သည့်အစက်အပြောက်, အပေါ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုဒီဇိုင်နာများမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်စားသုံးသူများအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးချင်သူတစ်ဦးအသည်းအသန်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုအောင်: ရိုးရှင်းသောဂန္ထိတွေ့ Controller, ဖော်ရွေပြားမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းဥယျာဉ်ကို ... ကျွန်တော်အသေးစိတ်မယ့်တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် optimization နှင့်အသစ်ကြိုးပမ်းမှုပြီးနောက်, ဒီအရှိဆုံးဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်နောက်ဆုံးတော့အောင်မြင်စွာရိုးရာအင်ဗာတာရေကူးကန်အပူစုပ်စက်၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲသောမွေးဖွားခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ကျွန်တော်ပြပွဲကာလအတွင်းဂျာမနီအတွက်သီးသန့်မိတ်ဖက်အောင်မြင်စွာ fixed ပါပြီ။ ဒါကဒေသခံကုန်သည်တွေနဲ့ရေကူးကန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဂျာမဏီတွင်တိုက်ရိုက်မစ္စတာတိတ်ဆိတ်ယ်ယူနိုင်ပါသည်ဆိုလိုတယ်! သငျသညျမစ္စတာတိတ်ဆိတ်စိတ်ဝင်စားပေမယ့် Interbad မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လာမည့်ပြပွဲ, လိုင်ယွန်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Piscine ကို Global ဥရောပ 2018 ထွက်လက်လွတ်မပါဘူး။ သငျသညျမစ္စတာတိတ်ဆိတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဗာတာကမိသားစုအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိကြလိမ့်မည်, မကျြနှာကိုမှမျက်နှာ လာ. ငါတို့ကိုပြောဆိုပါ။
လိုင်ယွန်အတွက်တဲ 5D126 မှာသင်မြင်ရဲ့အတူတကွပြောင်းပြန်လှန်အခွင့်အလမ်းကိုဖမ်းပါစေ!
အချိန် post: အောက်တိုဘာ-31-2018